Shinoa Sprayer sy Miss machine Manufacturing and Factory | Zhongmaohua
1. Ny setroka sy ny rano ao anaty tsokazo dia tsapan'ny vovoka manokana isan-karazany, ary ny vokatr'ireo setroka sy fofona rano dia tsara. Atsaharo ny fantsona fantson'ny setroka, lehibe ny setroka, tsara kokoa ny vokatr'ilay setroka, ary mihamando ny setroka; amboary ny fantsona fantsom-bavaky ny rano, ny sombin-drano misavoana fantsom-panafody dia misimisy kokoa momba ny fanamiana sy ny fanamiana, ny zoro zavona dia mitsingevana tsara, maharitra ny fiantraikan'ny zava-mahadomelina, ary mahavariana ny fiantraikan'ny fampidiran-dresaka feno fihenam-bolo.
2. Ny halavam-bokatry ny zavona dia novokarin'ny milina kelikely dia latsaky ny 30 microns. Noho ny lanjany maivana, ireo zato tsy misy fotony dia zatra voan'ny gravitation. Tsy hipetra-pitranga vetivety izy io noho ny fitotongananana toy ny tavoahangy novokarin'ny sprayers nentim-paharazana. Mitsingevana, miparitaka ary mitsofoka tsara. Mety miparitaka sy mijanona eny amin'ny rivotra mandritra ny fotoana maharitra. Ny dikan'ny setroka dia azo lazaina ho totona. Mety amin'ny sekoly, ny hopitaly, ny trano fisakafoanana, ny famonoana sy ny fanalefahana ny toerana be olona toy ny trano fandraisam-bahiny, ny indostrian'ny fialam-boly, ny sinema, ny fiara mpandeha lalamby, ny fiaramanidina, ny sambo, ny bus, ary ny fitateram-bahoaka hafa; gaga, seranam-piaramanidina, panty; zaridaina, faritra fonenana, fehikibo maintso, tobim-pamindrana fako, fako sy fisorohana ny moka, lalitra, akoho ary zavamaniry vektor hafa any amin'ny toeram-piompiana, mpanjaitra an-tanàn-dehibe ary fantsona fampandehanana, lakandrano, tetik'asa fiarovana fiaramanidina sivily, sns, mba hisorohana ny fiparitahan'ny tazo mahafaty na bakteria ary aretina mamely; Ny fanaraha-maso ny areti-mandoza sy ny disinidin'ny famolavolana sy ny logiciel
3. Mpanefy sprayer dia ampiasaina betsaka amin'ny landihazo, varimbazaha, vary, katsaka sy voly hafa, zaridaina zezika, hazo fihinam-boa, ala (ala ara-toekarena, zaridaina an-tanàn-dehibe, voninkazo misy voninkazo), zaridaina sy zavamaniry hafa fambolena amin'ny famonoana bibikely sy fambolena fambolena mahomby. ; faritra lehibe Fisorohana ny aretina sy ny bibikely bibikely amin'ny kijana;
Previous: Fiarovana mety amin'ny fitsaboana azo antoka
Manaraka: Custom China Disposable Factory Wholesale dia tsy misy lamba tenona 3ply Face Mask